China API 600 Gate Valve Ndị na-emepụta na ndị na-eweta ya | Akụkọ
Ọrụ ndị bụ isi: API 600, Ọnụ ,zọ ,má, Valve, OS & Y, Bolted, Bonnet, Flange, WCB, CF8, CF8M, C95800, Klas 150, 300, 2500, 4A, 5A, 6A Ngwaahịa Ngwaahịa: Nha: NPS 2 na NPS 60 Pressure Range : Klas 150 na Klas 2500 Flange Connection: RF, FF, Ihe RTJ: Nkedo: (A216 WCB, A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A995 4A, 5A, A352 LCB, LCC, LC2) Monel, Inconel, Hastelloy, UB6 STANDARD Design & rụpụta API600 Ihu ihu na ihu ASME B16.10 Njikọ Njikọ ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44 (NPS 22 Naanị) - ...
Ọrụ ndị dị mkpa: API 600, Ọnụ ,zọ ,má, Valve, OS&Y, Bolted, Bonnet, Flange, WCB, CF8, CF8M, C95800, Class 150, 300, 2500, 4A, 5A, 6A
Nha: NPS 2 ka NPS 60
Njikọ Flange: RF, FF, RTJ
Imewe & rụpụta API600
Ihu ihu na ihu ASME B16.10
1. zuru ezu ma ọ bụ Belata Bore
2.RF, RTJ, ma ọ bụ BW
3. N'èzí ịghasa & Yoke (OS&Y), na-ebili azuokokoosisi
4.Bolted Bonnet ma ọ bụ Nrụgide Akara Bonnet
5. Mgbanwe ma ọ bụ Solid Wedge
6. Ntughari oche yiri mgbaaka
API 600 Gate Valve bụ ọnụ ụzọ ámá valvụ dị ka API 600 ọkọlọtọ, API 600 ọkọlọtọ bụ ọkọlọtọ nke American Petroleum Institute. Ọ na-ejikarị ọnụ ụzọ ámá, ma ọ bụ ọnụ ụzọ ámá ma ọ bụ nke na-agbanwe agbanwe.
Atụmatụ ihe owuwu API600 Gate Valve
1. Ngwaahịa ngwaahịa na imepụta na-agbaso ihe ndị chọrọ nke ụkpụrụ dị elu, yana akara akara na arụmọrụ dị mma.
2. Nhazi usoro a kọmpat na ezi uche, ọdịdị ahụ dịkwa mma.
3. Ọ adopts osisi pịrị ọnụ akanye-ụdị na-agbanwe ọnụ ụzọ ámá owuwu, na Rolling biarin na-ajụ na nnukwu dayameta, nke na-eme ka ọ dị mfe imeghe na-emechi.
4. Thedị valvụ ahụ nwere ihe dịgasị iche iche, a na-ahọrọkwa mbukota na gasket n'ụzọ ezi uche dị ka ọnọdụ ọrụ n'ezie ma ọ bụ ihe ndị ọrụ chọrọ, nke a pụrụ itinye n'ọrụ na nrụgide dị iche iche, ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ ọrụ ọkara.
5. ịmụta a dịgasị iche iche nke anụ ụlọ na ndị mba ọzọ piping Flange ụkpụrụ na Flange akara n'elu ụdị izute dị iche iche engineering mkpa na onye ọrụ chọrọ.
Ntinye nke API 600 ọnụ ụzọ ámá:
1. Lelee n'ime oghere valvụ ahụ na ebe akara ahụ tupu echichi ya, ọ nweghịkwa unyi ma ọ bụ ájá ájá ka ha soro;
2. A ga-eme ka mkpọchi nke akụkụ njikọ ọ bụla dị ike;
3. Lelee akụkụ ndị a na-akwakọba ihe ka a pịa ya nke ọma, ọ bụghị naanị iji hụ na mgbochi nke mbukota ahụ, kamakwa iji hụ na oghere ọnụ ụzọ ámá na-agbanwe;
4. Tupu ịwụnye valvụ ahụ, onye ọrụ ga-enyocha ụdị valvụ ahụ, nha njikọ ya ma attentionaa ntị na ntụgharị usoro nke ọkara iji hụ na nkwekọ na ihe valvụ chọrọ;
5. Mgbe ị na-etinye valvụ ahụ, onye ọrụ ga-edebe ohere dị mkpa maka draịva ahụ;
6. A ghaghị ịrụ wiwi nke ngwaọrụ draịva dị ka eserese wiring;
7. A ghaghị ịchekwa valvụ API 600 API mgbe niile, ọ nweghị nkwekọ ma ọ bụ ịpịpịa ka a hapụ iji zere imetụta akara ahụ.
Nke gara aga: API 599 nkwụnye Valve
Osote: Bolted bonnet esorowo ọnụ ụzọ ámá valvụ
Api600 Ọnụ vezọ Gatemá
AKW STKWỌ AKW .KWỌ
Nkedo Steel Gate valvụ
Flange n'ọnụ ụzọ ámá valvụ
Wcb ọnụ ụzọ ámá valvụ
Flanged Gate valvụ
Igwe anaghị agba nchara n'ọnụ ụzọ ámá valvụ
Slab Ọnụ ụzọ ámá valvụ
Ọnụ ụzọ Knife Valve
Polyurethane Knife Gate Valve